WOWOW Bathroom Sink faucet 4 Inch Center Mafuta Rubbed Bronze
musha / Mabheji ekugezera / Kaviri Habata Bathroom Faucets / WOWOW Bathroom Sink Faucet 4 Inch Center Mafuta Rubbed Bronze
Rated 5.00 Kunze kwe5 yakavakirwa 17 kasitoma ratings
(17 kasitoma wongororo)
WOWOW faucet zana muzana KUPONESESWA KWAKAITWA - matepi ese akaongororwa pasi pekuomeswa kwemvura yakawanda yekumanikidza kuvimbisa mhando yepamusoro uye kutsungirira. 100 inch yakapararira yekugezera faucets, yakakwirira mhando dhiza kuvakwa yakanaka prime kupera yakagadzirirwa Kuita Kwehupenyu Contemporary Rutivi.
232120RB mirairo yekuisa
Black Centerset yokugezera faucets 2321200RB zvinyorwa: Kana iwe uri kufunga nezve edu ezvino zvigadzirwa, ndapota usazeza kusangana nesu nemutengo wemutengo. CENTERSET; Faucet dhizaini Clasique neiyo chosimudza tsvimbo uye pop up inomira. Faucet Bathroom ine maviri chete HANDLES FAUCET BATHROOM: Ruviri kubata faucet yakananga kururamisa mvura pamwe chete nemvura tembiricha kudzora. KUSHANDISA KUSHANDISA NEMAHARA ZVINOGONESWA: Iyo imba yekugezera Mafuta Akabikwa Bronze inosanganisira simbi drain musangano, mvura inobuda kunze kwepombi kubuda kuburikidza nekutsanya padanda rekusimudza, kudzivirira kutsikisa maoko ako akagezwa kumusoro. ONA FAUCET OIL RUBBED BRONZE: maviri akabata faucet dhizaini dhizaini retro. Rwisa kudzora. Dhiza yakaiswa faini dzenhema dzakakodzera imba yerendi, itsva condo, imwe-imba, mota imba, yekufambisa trailer uye kushandiswa kwedzimba. Ndokumbira kuti utibvunze kana paine mibvunzo.
SKU: 2321200RB Categories: Kaviri Habata Bathroom Faucets, Mabheji ekugezera Tags: yokugezera kunyura faucet, centreset lavatory, inch Centerset yokugezera, Oiri Yakabikwa Bronze
Ndiwo wandinofarira chimiro. Iyo ine yakanaka kurongedza, isina kupwanya muchitarisiko, uye zviri nyore kuisa. Mutengo unonzwisisika.
Murume wangu akagona kuisa nyore nyore! Ini ndanyanyisa kufadzwa nekutenga uku. Inotaridzika zvakanyanya kudhura kupfuura zvayaive uye ndinowana kurumbidzwa kwakawanda kwazviri. Wepamusoro notch mutengi s
Kugutsikana kwazvo nepombi iyi. Paunodzima pombi, iyo magineti inoshanda chaizvo uye inogona kuchengeta inosasa mukati. Handina zvichemo pamusoro pompombi.
Izvo zvinonetsa kuwana yakanaka brand brand kofi pombi iyo isingadzokere kumashure. Ini ndangoshandisa pombi chete kweinenge vhiki zvino uye yakashanda mushe kusvika parizvino.
Yakanaka mhando yekugezera pombi nyore kuisa. Ndakaitengera shanduko yangu yemvura tangi changer inokwana zvakakwana! Ndainakidzwa chaizvo!
Kuiswa kuri nyore uye kunotaridzika zvakanaka! Yakanyanya classy tarisa hafu yemutengo wezvawaizowana mumisha yekuvandudza zvitoro
Zvakaoma kurova pombi iyi pamutengo. Anofara kwazvo nekutenga kwangu.
Yakauya nekukurumidza kupfuura inofungidzirwa zuva rekutakura. Mabhokisi akanaka kwazvo. Yakanyanya nyore kuisa, uye inotaridzika chaizvo. Ini ndakatsiva pombi yeDelta, yaidhura 4X zvakanyanya, uye iyi nyowani inotaridzika zvakanaka uye yanga iri nyore kuisa. ZVAKANAKA kufadzwa.
Yakanaka yekutarisa chigadzirwa icho chaive chakanyanya nyore kuisa. Kupedza kwakanaka uye kunoshanda nemazvo.
Huremu hwakanaka, hwakauya mune yakanaka inodzivirira package. Kufambisa kwakanaka kwemaoko uye kukiya kwedhidhi. Ndingatenge zvakare uye ndozvainge zvaiswa rinenge mwedzi.
Chigadzirwa chikuru !! Super nyore kuisa. Ndakaishandisa kutsiva pombi muRV yangu uye yakanaka kwazvo, ndiri kutenga zvimwe kutsiva mapombi ekugezera ari mumba mangu.
Hunhu hwakanaka, inogadzirira rwizi rwakanaka rwemvura, zviri nyore kusunungura aerator, dhizaini yakanaka. Wakacherechedzwa kuti rimwe banga rakasununguka kupfuura rimwe. Inofanira kunge iri nyore kugadzirisa. Pakazara, mutengo wakakura weWOWOW pasina chero zvinoodza moyo. Kutenga kukuru!
Kufadzwa nehunhu, tarisa uye nyore kuisa ... Kuti ndakatenga yechipiri kune rimwe singi!
Mvura pa / kudzima yakanyatsojeka. Tarisa yakachena uye yakasarudzika. Ida iyo yekumanikidza yekudonha! Zvakawanda zviri nyore uye zvinobudirira kupfuura yekare lever-dhonza dhayeti iyo yakatsiva!
Kuisirwa kwaive nyore zvekuti ndaive nemwana wangu ane makore gumi nemana kuita iyo yekuisa (nekutarisa kwangu hongu). Anofara kwazvo nekutenga uku.
Mutengo unokwikwidza zvakanyanya uye ini ndinoda dhizaini dhizaini. Nzimbe yakarongedzwa zvakanaka nenzvimbo dzese dzakachengetedzwa. Mutengesi ndapota usachinje iko kurongedza. basa rakanaka. ndisina chokwadi asi izvi zvinoita sekunyarara kupfuura pombi dzekupedzisira dzandaive nadzo.
Zvakanaka chose! Inoshanda zvakanyanya. Yakareba uye inosvika nekumberi ipapo iya yandakanga ndamboita. Yakakwana kune yangu kunyorera. Kupedza kwemhando yepamusoro! Kwete plastiki. Basa rinorema! Anofara kwazvo nekutenga kwangu!
Pombi iyi ndeyemhando yepamusoro. Kuedza kutenga imwe uye ivo vese vaenda. Ndinofungidzira kuti ndakanga ndisiri ini ndoga ndaizvifarira.
Ndakaendeswa kuimba yangu nyowani iyo yaive neINOSVIMA sinki. Izvi zvaive nyore kuisa mukati uye zvinoita sekushamisa!